Mai Chibwe VekwaZimuto: Kukura usingazivi kuti baba vako ndiani.
"Ndiri murume ane makore 29. Ndinoshanda kuSouth Africa. Ndakarerwa namai naana mbuya. Handina kumoziva kuti baba vangu ndiani kana kuti varipi. Ndakazoona munhu osvika pandinoLoja ima oti anodawo pekugara achitsvaka basa. Ndiye akandiudza kuti munukuna vababa vangu. Ipapo mai vakashaika handina wekubvunza. Zvinoita here kuti mai vanorera mwana kusvika akura vasina kumuudza dzinza rake? "
Veduwee ngatitarise nyaya iyi kuti yakanaka nokuipa papi payo. Kana wakakura zvakadai, ndinyorererwo undiudze kuti unofungei nazvo uye kana wakakura babereki varambana unofungei futi nazvo?
Saka zvoreva kuti tichaenderera mberi nenyaya.
Ngatifanoverenga nyaya idzi takamirira
Posted by Mai E Chibwe at 14:23